Azu ụrọ Isotretinoin (4759-48-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Isotretinoin ntụ ntụ
SKU: 4759-48-2. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Isotretinoin ntụ ntụ (4759-48-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Isotretinoin, nke a makwaara dị ka 13-cis-retinoic acid, bụ ọgwụ e ji mee ihe iji mee ihe banyere oké ihe otutu. Obereghi, a na-ejikwa ya iji gbochie ụfọdụ ọrịa cancer anụ (carumous-cell carcinoma), nakwa n'ịgwọ ọrịa cancer ndị ọzọ. A na-eji ya na-emeso ụdị ichleosis ụdị ọrịa harlequin, ọrịa na-egbu egbu na-egbukarị egbu, na ichelosis ichelosis. Ngwurugwu ya, tretinoin, bụkwa ọgwụ mgbochi.
Isotretinoin ntụ ntụ video
Raw Isotretinoin ntụ ntụ bụ isi Characters
agba: Yellow ma ọ bụ oroma crystalline ntụ ntụ
Raw Isotretinoin ntụ ntụ eji
Raw Isotretinoin ntụ ntụ Aha
A na-akpọkwa Isotretinoin Absorica, Accutane, Amnesteem, Isotretinoin (CAS 4759-48-2), Claravis, Sotret.
Raw Isotretinoin ntụ ntụ Usage
Maka ndi mmadu noomal, Isotretinoin kwesiri ikwu okwu na 0.25-0.5mg oge, ugboro abụọ kwa ubochi. N'ihe kacha 2mg kwa ubochi, karia izu 20.
Ịdọ aka ná ntị na nsị Isotretinoin ntụ ntụ
A gaghị ekwe ka ị were nke a Ọ bụrụ na ịnwere ihe mgbaàmà:
 ị na-arịa ọrịa ọ bụla na isotretinoin ma ọ bụ vitamin A
 Ị dị ime, nwere ike ime ime, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịtụrụ ime
 ị na-enye gị ara.
Ihe na-emetụta ya bụ: egbugbere ọnụ na ọnụ na-egbu egbu, obere nkucha nke nku anya ma ọ bụ egbugbere ọnụ, akpụkpọ anụ, eriri afọ, iwe iwe, ma ọ bụ ntutu isi nwere ike ime.
A na-eji Isotretinoin eme ihe maka isi ihe otutu acne na acne nke na-anabataghị ọgwụgwọ ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe banyere ọgwụgwọ na-akwadokwa ojiji maka ọgwụgwọ nke nrịanrịa nke obere mpempe nke na-egosi ọgwụgwọ na ọgwụgwọ ndị ọzọ, ma ọ bụ na-emepụta ụbụrụ anụ ahụ ma ọ bụ nke uche.
Ọ dịkwa obere irè maka hidradenitis suppurativa na ụfọdụ ikpe nke rosacea siri ike. A pụkwara iji ya mee ihe iji nyere aka na-emeso harlequin ichthyosis, lamellar ichthyosis ma jiri ya mee ihe na-akpata xeroderma pigmentosum iji mee ka ndị na-eme ka ahụ dịkwuo ala. A na-eji Isotretinoinhas mee ihe iji na-emeso ọnọdụ dị oké njọ na-emekarị fibrodysplasia ossificans progressiva. A na-ejikwa ya maka ọgwụgwọ nke neuroblastoma, ụdị ọrịa cancer.
Usoro ọgwụgwọ Isotretinoin egosikwara na ọ dị irè megide ụtarị nke anụ ahụ na-eji eme ihe, ma a na-ejikarị ya mee ihe maka ihe ngosi a dịka e nwere ọgwụgwọ dị irè karị. Isotretinoin nwere ike na-anọchite anya usoro ọgwụgwọ ọzọ dị mma ma dị mma maka recalcitrant condylomata acuminata (RCA) nke cervix. N'ọtụtụ mba, usoro ọgwụgwọ a adịghịzi akwado ya ma jiri ya mee ihe ma ọ bụrụ na usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ emezughị.
Fọkọrọ Powder Isotretinoin (CAS 4759-48-2)
Raw Isotretinoin ntụ ntụ Marketing
Otu esi zụta Isotretinoin ntụ ntụ (CAS 4759-48-2) site na AASraw
AASraw na-enye 99% Cleaner raw ntụ ntụ si bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs maka ojiji oral.
Enotretinoin Raw Powder Recipes: